Aluminom Foil faiba glaasi Fabric Manufacturers & Suppliers - China Aluminium Foil faiba glaasi Fabric Factory
Fireproof Aluminium Foil faiba glaasi Cloth
Fireproof Aluminium Foil faiba glaasi Cloth bụ aluminum foil na faiba glaasi ákwà mejupụtara ihe. Site na teknụzụ pụrụ iche na nke dị elu, aluminom dị elu nke ihe mejupụtara ahụ dị mma, dị ọcha ma na-atụgharị uche dị elu, ya na GB8624-2006 dị ka ọkọlọtọ nyocha.
Aluminium Foil laminated faiba glaasi Cloth
Aluminium Foil laminated faiba glaasi Cloth bụ aluminum foil na faiba glaasi ákwà mejupụtara ihe. Site na teknụzụ pụrụ iche na nke dị elu, aluminom dị elu nke ihe mejupụtara ahụ dị mma, dị ọcha ma na-atụgharị uche dị elu, ya na GB8624-2006 dị ka ọkọlọtọ nyocha.
Aluminium ntekwasa faiba glaasi Fabric
Aluminium ntekwasa faiba glaasi Fabric bụ aluminum foil na faiba glaasi ákwà mejupụtara ihe. Site na teknụzụ pụrụ iche na nke dị elu, aluminom dị elu nke ihe mejupụtara ahụ dị mma, dị ọcha ma na-atụgharị uche dị elu, ya na GB8624-2006 dị ka ọkọlọtọ nyocha.
Faiba glaasi Aluminium
Faiba glaasi Aluminium bụ aluminum foil na faiba glaasi ákwà mejupụtara ihe. Site na teknụzụ pụrụ iche na nke dị elu, aluminom dị elu nke ihe mejupụtara ahụ dị mma, dị ọcha ma na-atụgharị uche dị elu, ya na GB8624-2006 dị ka ọkọlọtọ nyocha.
Aluminum faiba glaasi
Aluminium faiba glaasi bụ aluminum foil na faiba glaasi ákwà mejupụtara ihe. Site na teknụzụ pụrụ iche na nke dị elu, aluminom dị elu nke ihe mejupụtara ahụ dị mma, dị ọcha ma na-atụgharị uche dị elu, ya na GB8624-2006 dị ka ọkọlọtọ nyocha.
Aluminized faiba glaasi Cloth
aluminized faiba glaasi ákwà bụ aluminum foil na faiba glaasi ákwà mejupụtara ihe. Site na teknụzụ pụrụ iche na nke dị elu, aluminom dị elu nke ihe mejupụtara ahụ dị mma, dị ọcha ma na-atụgharị uche dị elu, ya na GB8624-2006 dị ka ọkọlọtọ nyocha.
Aluminium Foil ntekwasa faiba glaasi Cloth
Aluminium Foil ntekwasa faiba glaasi Cloth na tumadi mere site na pụrụ iche na Usoro ịmụta pụrụ iche nke fireproofing nkekọ kpụrụ na oké akpụkpọ ahụ, o nwere a ezigbo elu na elu luminous ngosipụta na ike ọdụdọ, ezi akara ike, na ọ bụ gas-proofing, na waterproofing.
Aluminium faiba glaasi Cloth
Aluminium faiba glaasi Cloth bụ nchebe zuru oke maka ikpuchi akụrụngwa nke dị nso na isi iyi na-enwu ọkụ dị ka mbadamba ọla na-ekpo ọkụ, mmiri mmiri na ọla ma ọ bụ iko, oghe ọkụ / plasma ma ọ bụ igwe ọkụ ọkụ. Na-echebe waya mmepụta ihe, eriri, eriri, igwe na ngwa akụrụngwa yana mkpuchi.
Aluminized faiba glaasi Fabric
Aluminized faiba glaasi Fabric na-mere nke faiba glaasi akwa laminated ihe aluminum foil ma ọ bụ ihe nkiri na otu akụkụ. Ọ nwere ike na-eguzogide ọgwụ radiant okpomọkụ, na nwere ezigbo ebe, ike dị elu, ezi egbukepụ egbukepụ, mkpuchi mkpuchi, mkpuchi gas na mmiri. Otutu nke aluminom foils sitere na 7micro ruo 25 micro.
Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Uwe faiba glaasi, Aluminized faiba glaasi Cloth,